“अचम्म को कुरा। कर नतिर्नेको घरमा पञ्चेवाजा झ्याई झ्याई!:: Mero Desh
“अचम्म को कुरा। कर नतिर्नेको घरमा पञ्चेवाजा झ्याई झ्याई!
Published on: ११ भाद्र २०७८, शुक्रबार ०५:५०
काठमाडौं । सरकारले तोके बमोजिम घर जग्गा/सम्पत्ति कर नतिर्नेहरुलाई कर तिराउन काठमाडौं म’हानगर पालि काले नयाँजुक्ति निकालेको छ।कर तिर्न आनाकानी ढिला सुस्ती भएको पाइए पछि बुधबार एक हप्ते ‘सूचना जारी गर्दै कर “नतिर्नेको घर–घरमा नेवारी पो”शाकसहित पञ्चे
बाजा बजाएर महानगर पुगेको छ” ।“सम्पत्ति कर नतिर्ने हरु लाई कर तिर्न एक हप्ताको समय नि‘र्धारण गर्दै कर नतिर्नेको घर आँगन तथा कार्यालयमा सूचना टाँसेको पनि छ ।”आज बुधबार_ महानगरपालि का न्युरोड स्थित केशा प्लाजामा पञ्चे “बाजा प्रवेश गरेर सम्पत्ति कर न’तिरेको
भन्दै सूचना टाँस गरेको छ” सूचनामा “अबको हप्ता दि”न भित्र कर नतिरे २०७५ को “ऐनको दफा १२ बमाजिम कार वाही गरिने भनिएको छ।यस अवधिमा कर नतिरे महानगर पालिकाले पसल तथा व्यावसायिक गतिविधि बन्द गराउने “चेतावनी पनि सूचना दिएको छ र ।साउन २४ गते नै एक
महिना भित्रकर तिर्न सूचना हरु “प्रकाशन गरिए पनि अटेर ग”रिए पछि महानगरले अब यस्तो एक्सन चाल्नुपरेको सूचनामा भनेको छ । यसले स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ अब महानगर ले कडाइ गर्नी लक्षण देखिएको छ।